Induction Kunyorera Copper, aluminium, Iron iron, ndarama, sirivha Fira
musha / Applications / Induction Kusungunuka / Induction Inonyunguduka
Category: Induction Kusungunuka Tags: induction melting, induction yakanyungudutsa simbi, induction melting process, induction kunyorera, kunyungudika, kunyungudzwa mukati mevira, simbi inonyungudika, yakanyungudutswa yesimbi induction
Chii chinonzi induction melting?
Induction inopera inzira iyo simbi inonyungudika kuita fomu remvura mune yeiyo induction yevira. Iyo simbi yakanyungudutswa inozodururwa kubva pakurovera, kazhinji kupinda muchimbi.
Induction inopera inokurumidza zvikuru, yakachena uye yunifomu. Kana yakanyatsoitwa, kudonhedzera kunyorera kwakachena zvokuti zvinokwanisika kukwidza nzvimbo yekuchenesa inokosha nedzimwe nzira. Kupisa kwunifomu kunokonzera mukati mesimbi kunobatsirawo pakuguma kwepamusoro. HLQ Induction inonyungudusa chira vave vakagadzira ergonomic features. Havasi kungoita kuti nzvimbo dzekuchengeteka dzive dzakachengeteka, dzinowedzera kubereka kuburikidza nekuita kushanduka kwekunyunguduka nekukurumidza uye kwakanyanya kufara. Ipi inoshandiswa? DaWei Induction inosungirika masangano inoshandiswa mumatareji, masayunivhesiti, ma laboratori uye nzvimbo dzinotsvakurudza. Mamiriro acho anonyungudutsa zvinhu zvose kubva kune zvimedu zvesimbi uye zvisingasviki kune nyukliya nezvinhu uye kurapa / mazino alloys.
Ndeipi midziyo / furimi inowanika?
HLQ Induction Heating Machine Co inopa akawanda akasiyana kudonhedzwa kunyorera vira mitsara inoenderana nemhando dzakasiyana-siyana dzekushaya: zvinokonzerwa ne-single-axis tiltpour, twese-axis-tilt-pour, sendo rinoshandura, rollover uye laboratory.
Induction Kunyorera Mhangura
PLC Kunyorera Tira Nokunyengedza
Induction Inoputira Sirivha